iPhone7ကိစ္စတွင် slider ကို7ပေါင်းဘို့မိုဘိုင်းဖုန်းကိစ္စ, iPhone,7ကတ်များကိစ္စတွင်သည်ပိုက်ဆံအိတ်အစားထိုးကတ်နှစ်ခုကိုက်ညီ
Min.Order အရေအတွက်: 3000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်နေ့လျှင် 10000 Piece
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T PayPal က
oem iml နှစ်ဆအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရုပ်ရှင်ဖုန်းကိုအမှု
IML ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြမြားနှငျ့ Feature ကို:
ပစ္စည်း: ပေရုပ်ရှင် + TPU PC, PC ကို + ကို ABS
IML နည်းပညာများစွာကိုအမျိုးမျိုးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်, အရောင်တဦးတည်းနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
အားလုံးပစ္စည်းများ Bayer ဂျာမဏီကနေတင်သွင်းသည်။
ဖုန်းအမှုအတွင်းပိုင်း pattern ညှိုးနွမ်းဘယ်တော့မှအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဖုန်းကိုအမှုပိုမိုနည်းပညာရွေးချယ်မှု။ ထည်, သားရေ, ဝါး, သစ်သား, flash ပါပါဝါ, စသညျများအတွက်
IML နည်းပညာထုတ်လုပ်သူ 1.10years ။ ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ R & D ဌာနရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီမှိုစေနိုင်သည်။
ဝယ်မယ့်အမြတ်အစွန်းသေချာစေရန် 2.More ယှဉ်ပြိုင်စက်ရုံစျေးနှုန်း။
3.Professional PD & QA သို့ဦးစီးဌာနထုတ်ကုန်များအတွက်အရည်အသွေးတိုပေးပို့အချိန်နှင့်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုသေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။
ထုပ်ပိုးရန်အမှိုပြုလုပ်ခြင်းထံမှ 4.Complete ဌာန။ ခြေလှမ်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအားဖြင့်လွတ်လပ်သောပြီးစီးဖြစ်လိမ့်မည်။
1.High အရည်အသွေးကို: တိုင်း pic ကိုပုတင်းကြပ်နှစ်ဆစစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုရှောက်သွားရလိမ့်မည်။
2.Best ပေးပို့အချိန်: လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများကထိန်းချုပ်တော်မူမည်
3.Competitive စျေးနှုန်း: အားလုံးစျေးနှုန်းအရာရှိတဦးဖွစျလိမျ့မညျ, အင်ဂျင်နီယာဌာနတို့ကအုပ်စိုး၏။
4.OEM ဒီဇိုင်း: 10years အတွေ့အကြုံကို OEM & လိမ္မော်ရောင်ထုတ်လုပ်သူ
HXS, Ltd, IML / IMD နည်းပညာထုတ်လုပ်ခြင်းခေါင်းဆောင်!
2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရှန်ကျန်း HXS နည်းပညာ, Ltd, IML နည်းပညာထုတ်ကုန်အာရုံစိုက်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် IML ဖုန်းကိုအမှု, IML ဖုန်းကို panel ကိုအပါအဝင်ကြီးမားသောဧရိယာဖုံးလွှမ်း, စသည်တို့ IML ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန် panel က, IML အိမ်သုံးပစ္စည်း panel က, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ panel က။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ 3000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း, ရှန်ကျန်းစီးတီး, တရုတ် Longgang ခရိုင်, Henggang မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ Liuyue မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများကအနီး။ အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းလှ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံလွတ်လပ်စွာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအားလုံးနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဆာဌာန, ပုံနှိပ်ဌာန, ဌာနဖွဲ့စည်း, ဆေးထိုးဦးစီးဌာန, စစ်ဆေးခြင်း department.our န်ထမ်း 300 နီးပါးကလူပါ။ ဒါ့အပြင် သာ. မြတ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာအခွက်ရှိပါတယ်။
ယခုငါတို့ထိုသို့သောစသည်တို့ကို LG, Oppo, BYD, INCASE, TTPOD, လဝ, ကိတ်ဂေါ်ပြား, အဖြစ်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမိတ်ဖက်, များစွာသောကျော်ကြားသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်လာကြပါပြီ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနဲ့ဖန်တီးမှုထုတ်ကုန်များကို" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အနိုင်ရရှိအနိုင်ရရှိအနာဂတ်လုပ်ရှိသမျှကို time.Welcome လုပ်ဖို့အပြင်းအထန်တောင်းဆို။
IML (In-မှိုတံဆိပ်) ဆေးထိုးဖို့ပေရုပ်ရှင်အပေါ်ပုံစံပုံနှိပ်သောဖုန်းအသစ်အမှုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
IML IMD (In-မှို Decoration) ၏အဆင့်မြှင့်ထုတ်ဝေဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့ 10 နှစ်အတွေ့အကြုံအတွက် IML နည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် IML ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ပုံနှိပ်ဖို့မှုမြား မှစ. ဖွဲ့စည်းခြင်း, Injection, စစ်ဆေးရေး, ထုပ်ပိုး။ အဆင့်များအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများကပြည့်စုံရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ IML စီးရီးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်အဓိကဖြစ်ကြသည်။ IML ဖုန်းကိုအမှု, IML ဖုန်းကို panel က, IML ဒစ်ဂျစ်တယ် panel က, IML စမတ်လက်ပတ်နာရီ panel.IML ပါဝါဘဏ် panel က, etc IML အဝတ်လျှော်စက် panel က, IML လျှပ်စစ် cooker panel ကိုအပါအဝင်
သင် OEM ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သလား?
ကျနော်တို့ IML နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆယ်နှစ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုများနှင့်လိုအပ်ချက်ပုံနှိပ်နမူနာဆပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဘို့ငါတို့လက်ရှိနမူနာများအတွက်အခမဲ့ရလိမ့်မည်။
အမိန့်အဘို့နမူနာများနှင့် 3-5days များအတွက် 2-3days ။ အဆိုပါအကြီးစားကုန်တင်သင့်ရဲ့အရေအတွက်နှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခင်: IMD Iphone စီးရီးများအတွက်ရောင်စုံ tpu + pc ဖုန်းကိုအမှု electroplated
နောက်တစ်ခု: Iphone စီးရီးအသစ်ရောက်ရှိပုဂ္ဂလိကမှို oem သားရေဖုန်းကိုအမှု
တရုတ်ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန်7Plus အား
iphone ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန် 7
iphone ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန်7Plus အား
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရပ်မှန်7Plus အား
Iphone7Plus အားများအတွက်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရပ်မှန်
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရပ်မှန် Iphone 7
ဖုန်းဖြစ်ရပ်မှန် Iphone7Plus အား
Tpu Iphone7ဖြစ်ရပ်မှန်
Tpu Iphone7Plus အားဖြစ်ရပ်မှန်
Alibaba တရုတ်ဖုန်းကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ oe ...
oem gradient ကိုတောက်ပနေအမှုန့် tpu မိုဘိုင်းဖုန်းအဖုံး